वास्तविक भारतको खोक्रो चित्र – eratokhabar
वास्तविक भारतको खोक्रो चित्र
ई-रातो खबर २०७३, २६ साउन बुधबार १२:१९ August 10, 2016 1213 Views
(जनता दल युनाइटेडका सांसद केसी त्यागीको माथिल्लो सदनमा वक्तव्य । शीर्षक हामीले दिएका हौँ
हामी आर्थिक सुधारका २५ वर्ष मनाउन गइरहेका छौँ । पत्रिकाहरूमा ठूलाठूला प्रचार आइरहेका छन् । हाम्रो दायाँपट्टि रहेका नयाँ मित्रहरूले त नेहरूका नीतिहरूलाई धेरै अघि छोडिसक्नुभएको छ । उनको स्थान अब मोन्टेक महोदयले लिएका छन् । हाम्रो बायाँतिर कलराज मिश्र, बौद्धिक पनगिद्या र सुब्रमण्यम प्रभात झा सामेल छन् ।
म यहाँहरूलाई २४ जुलाई १९९१ मा मनमोहन सिंहले भन्नुभएका दुईवटा पङ्क्ति वाचन गर्न चाहन्छु । ‘दुनियाँको कुनै शक्तिले पनि त्यस विचारलाई रोक्न सक्दैन, जसको समय आएको छ ।’ त्यो अनिवार्य आउने कुरा आर्थिक पुनर्संरचना हो । त्यो के हो ? बजारको भूमिकालाई सर्वोपरि स्थानमा राख्नु, निजी क्षेत्र, व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु, उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । महोदय, त्यो अभ्यास थेचर र रेगनले क्रमशः बेलायत र अमेरिकामा गरेका थिए । म एकपटक फेरि मनमोहन सिंहको भनाइ पेस गर्न चाहन्छु– नयाँ भारत बनाउनका लागि नेहरूको पानीआन्द्रे प्रतिबद्धता छोड्नुपर्छ । म यहाँहरूलाई माननीय यशवन्त सिंहको अर्को भनाइ पनि सुनाउन चाहन्छु– केन्द्रीय नियोजनमाथिका हाम्रो प्रतिबद्धता ठूलो गल्ती थियो ।
यिनीहरू र उनीहरूको आर्थिक नीतिमा मैले कुनै भिन्नता देखेको छैन । युरोप र अमेरिकामा ती नीतिहरू अवलम्बन गर्दा कस्तो परिणाम आएको थियो ? त्यस विषयमा म मेरा मित्र जेटलीज्यूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सन् २००७ र सन् २००८ मा युरोप र अमेरिकामा ठूलो मन्दी आएको थियो । जसले अमेरिका र युरोपको समाज व्यवस्थालाई थङ्थिलो पारेको थियो । हाम्रा सक्षम पिताका सक्षम पुत्र यशवन्त सिंह मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा छ, उहाँ त्यहाँ अध्ययन गरेर पनि आउनुभएको छ । त्यहाँ त्यसबेला बैङ्कहरू टाट पल्टिएका थिए । जेपी मोर्गनलाई बैङ्क होल्डिङ कम्पनी बनाएर सरकारका सामु आत्मसमर्पण गर्नुपरेको थियो । जसमाथि धेरैको ठूलो भरोसा थियो । युरोपको हविगत त झनै नाजुक थियो । मिश्र, आइसल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेन सबै मन्दी र बेरोजगारको सिकार भएका थिए । बेलायतले रेल सेवालाई राष्ट्रियकरण गर्नुप¥यो । हाम्रा सुरेश प्रभुज्यूले यहाँ रेल सेवालाई निजीकरण गर्न लाग्नुभएको छ । हाम्रा सारा दूरसञ्चार सेवा घाटामा गएका छन् । ती सारालाई निजीकरण गर्नुपरेको छ ।
न्युजिल्यान्डमा कतिपय संस्थाहरूलाई दोस्रोपटक फेरि राष्ट्रियकरण गर्नुप¥यो । रेल सेवालाई पनि राष्ट्रियकरण गर्नुप¥यो । अमेरिकामा ….. जब हामीकहाँ सामाजिक क्षेत्रको कुरा चल्छ, नयाँ आर्थिक नीतिका ठेकेदारहरू नाकमुख खुम्च्याउँछन् । तर त्यहीँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गर्न रोक लगाइएको छ । बेलायतमा रेल सेवा राष्ट्रियकरण गरियो । दूरसञ्चारलाई त्यसै गरियो । ती सार्वजनिक स्वामित्वमा आए । न्युजिल्यान्डमा र अमेरिकामा त्यसै गरियो । यो तपाईंको आदर्श समाज युरोप र अमेरिकाको अवस्थाको चित्र हो ।
दुवै सरकारहरूको सुधार कार्यक्रमपछि पाँच–६, शब्दहरू प्रचलित हुन थालेका छन्– चम्किरहेको भारत, चमकदार, भारत, भारत एउटा उदीयमान शक्ति, चढिरहेको भारत, भारत भूमण्डलीकृत शक्ति, भारत सर्वोपरि । सन् २००४ मा म पनि एनडएीका तर्फबाट ‘फिल गुड इन्डिया’ को उम्मेदवार भएर मेरह गएको थिएँ र पराजित भएर फर्केको थिएँ ।
यतिबेला भारतको वास्तविक स्थिति सहारा मरुभूमिका बसिन्दाको भन्दा पनि दयनीय छ । यद्यपि चम्किरहेको भारत अलग्गै छ । २० करोड भारतीयको अवस्था सहारा मरुभूमिका बासिन्दाको भन्दा दयनीय छ । भारतका ४५ प्रतिशत बच्चाहरू विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा कम तौलका छन् । ८० प्रतिशत भारतीय बच्चाहरू कुपोषणको सिकार भएका छन् । यद्यपि यी एनपीएहरूका बच्चा होइनन् । यस्तो भन्नुपरेकोमा म क्षमा चाहन्छु । ८० प्रतिशत बच्चाहरू रक्तअल्पताको सिकार भएका छन् । म फेरि भन्छु यी बच्चाहरू सरकारी पार्टीका नेताका बच्चाहरू होइनन् । चम्किला सामान तपाईंको, निजी विद्यालय, निजी क्याम्पस, विश्वविद्यालय, निजी अस्पताल, एनसीआरका अस्पताल र मुम्बईका अस्पताल, नर्सिङ होम, नयाँ पाँचतारे होटेल यत्ति नै चम्किलो भारत होइन भनेर अर्जुनसेन गुप्ताको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा बढिरहेको छ । त्यो त सरकारी आँकडा हो । जसलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । ९६ करोड भारतीय नागरिकले दैनिक २० रूपैयाँभन्दा कमले दैनिक जीवन टार्छन् । जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छन् । म राजनीतिक कार्यक्रमका सिलसिलामा पटकपटक जेल गएको छु । भारतका एक तिहाइ नागरिकहरू जेल नियमावलीको मापदण्डभन्दा पनि अस्वस्थकर खाना खाएर बाँचेका छन् ।
अब म कृषि क्षेत्रका विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु । विडम्बना ! हामी गाउँमा किसानका घरमा जन्मियौँ । हाम्रा अकाली दलका मित्रहरू पनि गाउँमा गएपछि उनीहरूजस्तै भएका छन् । महोदय, गमलामा खेती गर्नेहरूले हामीलाई कृषि उत्पादनको उपदेश दिइरहेका छन् । के योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू केही हुनसक्छ ? म तपाईंको माध्यमबाट अकाली दलका मित्रहरूसँग भन्न चाहन्छु, चुनाव नजिकै आएको छ । कमसेकम यसबेला त सतर्क हुनुहोस् । गएका दिनमा सरकारी कर्मचारीको तलब १५० देखि १६५ प्रतिशतसम्म बढेको छ । शैक्षिक क्षेत्रको त १५० देखि १७० प्रतिशतसम्म बढेको छ । सबै शिक्षकहरूको तलब २८० देखी ३२० सम्म बढेको छ । सिन्हाज्यू सातौँ वित्त आयोगपछि एकजना चौथो श्रेणीको कर्मचारीको १८ हजार प्रतिमहिना तलब हुन्छ । तर त्यही स्थितिमा किसानले उसको पैदावारमा कति पाउँछ ? त्यही फरक स्थिति नै कृषि सङ्कटको कारण हो । जटियाज्यू, म एउटा मूल्य तालिका सुनाउन चाहन्छु । सन् १९७० मा गहुँको प्रतिक्विन्टल मूल्य ७६ रूपैयाँ थियो । म चाहन्छु सदनका सबै सदस्यले के थाहा पाऊन् भने आज गहुँको मूल्य १४५० मात्र भएको छ । अथवा गहुँको मूल्य ४५ वर्षमा १९ गुणाले बढेको छ । गैर कृषि क्षेत्रमा भने ३०० गुणाभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । महोदय, मेरो भनाइ के हो भने गहुँको मूल्य पनि सय गुणा बढाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा गहुँ प्रतिक्विन्टल ७,६०० रूपैयाँ हुनेछ । गैरकृषि क्षेत्रमा त्यति धेरै मूल्य बढाउन सकिन्छ भने कृषि क्षेत्रमा किन सकिन्न ? त्यसैले म तपाईंमार्फत सदनमा दायाँ बस्ने, बायाँ बस्ने वा बीचमा बस्ने सबै ९९ प्रतिशत सहमत हुनेछन् । महोदय, यसको समाधान के हो ? डा. मनमोहन सिंहले परिवर्तनको समय आइसकेको बताउनुभएको थियो । मेरो के निवेदन छ भने २५ वर्षदेखि हामीले नेहरू नमुना छोड्यौँ, दीनदयालको अन्तिम उदय छोड्यौँ । के त्यसपछि हामीले सुनौली, चहकिलो भारत दियौँ कि दिन सकेनौँ । सुनौली भारत बनायौँ भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । भर्खरै नरेश महोदयले ठिकै भन्नुभएको थियो । हामीले जीएसटीलाई सहयोग गरेका थियौँ । हामी एफडीआईमा ४९ प्रतिशतका विरुद्ध थियौँ ।
तपाईंले असजिलो नमान्नुहोला, तपाईंले एलआईसी ल्याउनुभएन । हामी त्यसका पक्षमा थिएनौँ यद्यपि हामीले सहयोग गरेका थियौँ । दुई दिनपछि संसद् स्थगित हुनेछ र भनिनेछ– प्रतिपक्षीहरू देशको प्रगतिका बाधक छन् । तपाईंको हृदय नै दूषित छ, हामी बाधक होइनौँ । तपाईं अरू केही पेस गर्नुस् हाम्रो सहयोग रहनेछ । तर तपाईंहरूको यो यात्रा पण्डित दीनदयालज्यूको यात्रा होइन । उनीहरूले अपनाएको यात्रा पण्डित जवाहरलाल नेहरूको यात्रा पनि होइन । यो बाटो रेगनको हो, थेचरको हो, जसका कारण रुस, अमेरिकाको दुर्दशा भयो । युरोपमा मन्दी आयो । युरोपको आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय देशका सरकारहरू पतन भए । महोदय, यो कुरा तपाईंको जानकारीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ किनकि यो कुरा तपाईंसँग पनि जोडिएको छ । यो देशमा पूजापाठका लागि २५ लाख स्थल छन् । मरो घर सनातनी हिन्दुको घर हो । कतिपय मान्छेहरू आर्य समाजी छन् । म उनीहरूको विरोधी होइन तर यहाँ पन्ध्र लाख विद्यालय पनि छन् । पूजा गर्ने स्थान २५ लाख भएको देशमा १५ लाख मात्र विद्यालय रहेका छन् । मैले विवेकानन्दज्यूलाई बुझेको छु । उहाँले भन्नुभएको थियो, “यो विदेशी भेष छोडेर आदिवासी बस्तीमा जाऊ र त्यहाँका बच्चाहरूलाई पढाऊ, त्योभन्दा ठूलो धर्म केही छैन ।” तर हामी उहाँको अनुसरण गर्दैनौँ । हामीसँग पूजा–अर्चनास्थल २५ लाख, अस्पताल ७५ हजार र विद्यालय १५ लाख छन् ।
आजभोलि मालदार थोकबजार मौलाएको छ । होटेलमा योयो परिकारमा यति छूट छ भनेर लेखिएको हुन्छ । जसमा आधा प्रतिशत तीर्थस्थलका विषयमा हुन्छन् । म यो तथ्य राख्न चाहन्छु सन् २०१० मा भारतमा ३० लाख गैससहरू कार्यरत थिए । यसको अर्थ हरेक ४०० नागरिकको टाउकामा एउटा गैरसरकारी संस्था उभिएको थियो । त्यसको परिणाम जनताको लुटपाटबाहेक अरू केही भएन । महोदय, म तपाईंसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब त्यो समय आइसकेको छ । म हाम्रा नयाँ भाइचारा काङ्ग्रेस पार्टीका मित्रहरूसँग पनि भन्न चाहन्छु तपाईंले थोरै हाम्रा कुरा पनि सुन्ने गर्नुस् ।
पण्डित जवाहरलाल नेहरूका नीतिहरूको बाटोमा हिँडेर तपाईं यहाँसम्म आउनुभएको थियो । इन्दिराज्यूले राष्ट्रियकरण गर्नुभएको थियो । गएको सरकारमा वामपन्थीहरू नभएको भए यूपीए सरकार गिर्ने थियो । अन्यथा भारतको अवस्था अमेरिकाको जस्तो हुने थियो । जसको कारण बैङ्कहरूको राष्ट्रियकरण गरिएन । त्यही कारणले एलआईसीको राष्ट्रियकरण गरिएन । बचेखुचेका कामहरू यिनै वामपन्थीहरूले तपाईंमार्फत गराए । त्यसैले तपाईंको नयाँ आर्थिक नीति अनुत्पादक भैसकेको छ । म ती मान्छेहरूप्रति सहमत छैन ।
पुँजीवादको पनि विकासको अवधि हुन्छ । त्यसको विकासको मूल्यबोध हुन्छ । जब पुँजीवादको आगमन हुन्छ, समाजको कतिपय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कामहरू हुन्छन् । तर भारतमा पुँजीवाद आएन । त्यसको विकृत रूप प्रकट भयो । जसको कारणले भारतमा असमानताको चाङ लागेको छ । ….. डा. मनमोहनसिंहको पालामा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ९न्म्ए० अधिकतम ९.३ प्रतिशत थियो । म मेरा मित्रहरूसँग गुनासो गर्न चाहन्छु– त्यसै समयमा भारतमा असमानता सबैभन्दा बढी थियो । १२५ जिल्लामा नक्सालवादीहरू तपाईंको खोजीमा दौडिरहेका छन् । सिन्हा महोदय, जहाँबाट सदनमा आउनुहुन्छ, त्यही राति ८ बजेपछि उनीहरूको शासन चल्न थाल्छ । तपाईं कृपया त्यस्तो नगर्नुस् । गरिब र धनीहरूका बीचमा दूरी हाम्रा आर्थिक नीतिहरूका कारण बढ्दछ । गरिबहरू केही समय भोकमरीका कारण मर्न सक्छन् तर कुनै दिन भोक र हतियारमध्ये एउटा रोज्नुप¥यो भने मान्छेले त्यसबेला हतियार रोज्न सक्छ । इतिहासमा त्यस्तो अवसर हाम्रो देशमा आएको छ । कयौँ देशमा आएको थियो । त्यसैले आर्थिक नीतिका विषयमा एकपटक बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न आवश्यक छ । ममा काङ्ग्रेसी मित्रहरूप्रति कुनै नकारात्मक सोचाइ छैन । त्यसैगरी तपाईंहरूप्रति पनि छैन । कमलराजज्यू हाम्रा पुराना मित्र हुनुहुन्छ तर उहाँले पनि बिर्सनुभएको छ । ….. कमलराजज्यू तपाईं त सातपटक सांसद भैसक्नुभएको छ । तर नयाँ आर्थिक नीतिहरूमा पनगढिया, सुब्रमण्यम थाहा छैन कोको आए, तपाईं उनीहरूबाटै प्रभावित भएर हिँडिरहनुभएको छ । त्यसैले अब त्यो समय आइसकेको छ, त्यसमाथि नयाँ तरिकाले विचार गरौँ । २५ वर्षपहिले नयाँ आर्थिक नीति अनुसरण गर्ने समय आएको थियो । म यो भन्न चाहन्छु– अब त्यसबाट पछाडि फर्कने ९च्झयखभ० समय आएको छ ।
स्रोत समकालीन तीसरी दुनियाँ,
अनुवाद ः अनिल
नेपालमा फेरि सेना हुल्ने भारतीय षड्यन्त्र